2 Basic Ụzọ ele PowerPoint on iPhone 4S
> Resource> iPhone> Olee otú iji Play PPT on iPhone 4S
Ọ bụ ihe ịtụnanya na iPhone - ma ọ bụ ọhụrụ iPhone 4S - pụrụ ịrụ n'ezie ka onye dị ike PC. Nke a pụtara na e wezụga sọọfụ web, na-ewere foto na egwu egwuregwu - elele faịlụ na-ekwe. N'ezie, mgbe anyị na-ekwu "faịlụ" a anaghị ekpuchi PDF, EPUB ma ọ bụ ndị ọzọ eBooks. Ebe a "faịlụ" na-ezo aka PowerPoint, Okwu ahụ, ma ọ bụ na ndị ọzọ na-adị kwa ụbọchị Excel faịlụ.
Ọ bụ ezie na iPhone n'onwe ya adịghị akwado n'elu kwuru banyere faịlụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka ọ na-arụ ọrụ, e nwere ụzọ na-eme ka ọ na-eme. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga ikwu okwu banyere ihe abụọ bụ isi ụzọ na-egwu PowerPoint on iPhone. Ok, ka ina malitere.
Tọghata PPT ka PDF maka iPhone Dị ka m kwuru na iPhone (iPhone 4S) anaghị akwado PowerPoint, ma PDF faịlụ, mere mbụ nhọrọ na-converting PPT ka PDF maka iPhone. Ọ bụ mara mma dị mfe iji nweta ya mere ebe Microsoft PowerPoint nyere nhọrọ maka gị. Emeghe gị PowerPoint, pịa Office Button n'elu ekpe nke window na ịnyagharịa Zọpụta AS> Chọta tinye-ins maka faịlụ ndị ọzọ formats. Mgbe ahụ ị ga-ahụ "Save dị ka PDF ma ọ bụ XPS tinye-na" peeji. Mgbe ahụ, ị mkpa ibudata na wụnye tinye-na. Mgbe ahụ, ị nwere ike enweta ndị Office button, Zọpụta PowerPoint dị ka Adobe PDF maka iPhone.
Ọ bụ free, ma ọ bụghị adaba agụ PDF faịlụ. Ị ga-ekweta na ọ bụ ezie na iPhone mmasị iBooks pụrụ ịgụ na site PDF, obere ngosi na-eme ka o sie ike na-agụ PDF faịlụ. Ị ga-ịdọrọ PDF dabara ihuenyo ugboro ugboro.
Tọghata PPT ka iPhone dakọtara video Video ngosi bụ ihe kwụ ọtọ na-azọpụta oge. Iji mee ka vidiyo si na PowerPoint maka iPhone, i nwere ike iji Wondershare PPT2Video Pro. Ọ na-enyere gị iji tọghata PowerPoint ka iPhone na 3 nzọụkwụ.
1. Launch PPT2Video Pro ma họrọ Mepụta Video faịlụ site PowerPoint. Mgbe ahụ, na mmapụta, pịa Tinye mbubata PPT faịlụ na pịa Next
2. Ke Ntọala, họrọ MP4 dị ka mmepụta format
3. N'oge bupu, pịa Malite.
Bingo! Ọ bụ ya! Na ị na mere ya. Mgbe ị tọghata PPT ka iPhone dakọtara format, ị na-adịkwaghị mkpa ịdọrọ faịlụ dabara na iPhone. Ma nanị drawback bụ na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ maka PPT2Video Pro.